TablighJamaat - WRSP
TABLIGH JAMA'AT MGBE
A mụrụ 1885 Mahadlana Muhammad Ilyas Aktar Ilyas na ụlọ nne nne nne ya n'otu obere obodo Kandhla dị na Utar Pradesh, India.
1896 Ilyas, mgbe ọ dị afọ 10, kwagara Gangoh ebe nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Mohammad Yahya, bi ma malite ịnakwere nkuzi banyere Islam site na ya.
1908 Ilyas debanyere aha na Darul Uloom Deoband iji mụọ Qur'an, Hadith, na Islam Jurisprudence.
1918 Mgbe onye okenye ya bụ Muhmmad Yahya nwụsịrị, a na-eme Ilyas imam na ụlọ Nizam u'd-din ụlọ alakụba.
1926 E guzobere Tabligh nke ndị Jamaị.
1941 (Nọvemba) Mgbakọ ogbi mbụ nke Tablighi na Basti Nizam u'd din na ndị 25,000 bịara.
1944 (July 13) Mahadmad Muaammad Ilyas nwụrụ.
1944 Onye ndu nke Tabligh Jamaa gafere Muhammad Yusuf, nwa Ilyas, mgbe Ilyas nwụsịrị na 1944.
1926-2012 Tabligh Jamaa na-etolite ghọọ òtù nchịkwa nke Islam dị iche iche nke ụwa, nke nwere nde mmadụ iri asatọ na-anọ na mba 200 ndị na-ekpuchi mpaghara ụwa dum.
Onye nchoputa Tabligh Jamaa (kpoo [Group of Islam] Group), Mawlana Muhmmad Ilyas, a mụrụ Aktar Ilyas na 1885 ọ bụkwa ọdụdụ nwa nwoke atọ. Nna ya bụ Mawlana Muhammad Ismaill, onye mmụta na onye nsọ bụ onye nkụzi okpukpe a ma ama. Ọ kụziiri ụmụazụ Mirza Ilahi Bakhsh, bụ onye metụtara alụmdi na nwunye Bahadur Shah Zafar, onye Mughal ikpeazụ nke na-achị Delhi. Ụlọ ya bụ obere ụlọ n'elu ọnụ ụzọ ámá uhie nke dị nso n'akụkụ ili nke Hazrat Nizam u'd-din Awliya nke dị na ndịda Delhi. Ismail bụkwa imam (onye ndú) nke Banglawali Masjid (nke guzo na Nizam u'd-din) ma na-eme Sufism (Islam mysticism).
Ilyas toro na Kandhela ebe a mụrụ nne ya. Otú ọ dị, o jikwa ụfọdụ akụkụ nke nwata ya na Nizam u'd-din. Nne ya, Bi Safiya, bụ ndị inyom dị nsọ nwere ncheta dị ịrịba ama bụ ndị a ma ama maka ịgụgharị, na nhụjuanya, dum kor'an ọtụtụ ugboro n'oge Ramadan (ọnwa Muslim nke ibu ọnụ). Dịka ụmụnne ya abụọ ndị okenye, Ilyas nwetara agụmakwụkwọ ya site na ụlọ akwụkwọ gọọmentị, ụlọ akwụkwọ ya jikwa ọmụmụ ọmụmụ Koran na ntụziaka okpukpe. O nyere K'an'ana dum ka o cheta ya mgbe ọ ka dị obere ma dị nnọọ mkpa n'inye ndị ọrụ ise ya kwa ụbọchị (ekpere ekpere). Ezinụlọ ya abụghị nanị enyi, kama ebubo ha na ime mmụọ na nsọpụrụ Chineke. Ezigbo nne ya na nne nne ya na-akọ akụkọ banyere amuma Muhammad na ndị enyi ya na ya na "ikuku nke nsọpụrụ nke o biri na-enye ìhè site na ihe omume na ihe mere na ndụ nke ndị ikom na ndị inyom mara ama ọ maara ma ọ bụ nụ banyere imebi ihe a "(Haq 1972: 82).
Ilyas mbụ nke Islam Islam malitere n'oge ya iri afọ mmepe n'okpuru Mawlana Rashid Ahmad Gungohi. N'ihe banyere ọrịa siri ike, Ilyas aghaghị ịkwụsị ọmụmụ ihe ya (Hasni nd), ma ọ maliteghachiri ha mgbe ha nwesịrị, mgbe Gungohi nwụkwara, Ilyas chọtara onye nkụzi ọhụrụ na Mawlana Khalil Ahmad, n'okpuru nduzi ya, Luk (njem siri ike na Chineke) (Azzam 1964) wee ghọọ onye na-eso Nakshbandiyya Sufi. N'ikpeazụ, ọ gara Deoband (n'ebe ugwu nke Delhi, ugbu a na district Saharanpur, Utthar Pradesh) ebe ọ mụrụ Tirmidhi na Sah ih al-Bukhari (akwụkwọ hadiths) n'okpuru Mawlanas Mahmud-u'l-Hasan Deobandi, Ashraf Ali Thanawi na Shah Abdur-Rahim Raipuri, bụ ndị nọchiri anya Gungohi. Ilyas natara akwụkwọ nkwado (Mahadlana Mahmud-u'l-Hasan Deobandi).
Deoband madrasa keere òkè dị ukwuu n'inwe ọgụgụ isi Ilyas, karịsịa na nkà mmụta okpukpe Islam. Deoband madrasa tọrọ ntọala na 1867 dị ka onye nduzi Islamist reformist n'oge British nọ na zenith nke ọchịchị ha na India. Deoband madrasa bụ nzaghachi nke Islam banyere ụzọ isi ọchịchị Briten si eji ọrụ ndị ozi ala ọzọ nke Ndị Kraịst kụziere ụmụ akwụkwọ na ụkpụrụ nke Iso Ụzọ Kraịst. Deoband madrasa dị ka onye na-eme mgbanwe na islam guzobere na Sunni Islam na ụzọ Hanafi na-esite n'ikike ma jiri nke nta nke nta ghọọ òtù na-eme mgbanwe na-anọchi anya Islam dị ọcha na South Asia (Metcalf 2005).
Ọtụtụ n'ime ndị 'alim (ndị isi alakụba Alakụba) na Deoband nakweere ndụ nnabata dị mfe nke dọtara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ mbido itinye onwe ha n'ịhụnanya Chineke. Agbanyeghị, dịka ndị ndozigharị, ndị Deobandis (ndị Alakụba na-agbaso usoro Deoband Islamic movement guzobere na Deoband n'onwe ya na 1866), ghọtara nsogbu ụwa nke ọma ma si otú a banye n'okporo ụzọ iji imitateomie omume nke oge mbụ nke Islam nke ịkụziri ndị Alakụba na ozi ha nke izipu okwu Allah nye ma ndi ojoo na ndi n’amaghi ama. Ha maara Akwụkwọ Nsọ nke ọma ma jiri ike ọmụma ha katọọ omume ọdịnala mmekọrịta. Ndị a gụnyere ememe na ememme usoro ndụ, ofufe nsọ na ọdịnala nke Shi'ah (nzukọ okpukpe okpukpe okpukpe nke Islam nke ndị na-akwado ya kwenyere na 'Ali, nwanne nwanne onye amụma Muhammad na ọgọ nwoke, bụ onye nọchiri Muhammad), dịka taziyah (ihe Shi Shi re-enactment nke ahuhu na onwu nke Hussein - nwa nwa onye amuma Muhammad), dika ihe omuma ndi Islam. Ilyas bụ akụkụ dị mkpa nke ihe ọgụgụ isi a ma emesịa na ndụ ya jikọtara ihe ọmụma na omume iji malite ihe ghọrọ Tabligh Jama'at nke mmeghari ime mmụọ.
Ọ bụ na 1918, mgbe ọ nwụsịrị nwanne ya nwoke bụ Muhammad, na e mere Ilyas imam na ụlọ Nizam u'd-din ụlọ alakụba wee malite ịkụzi na madrasa (Haq 1972). Ọ bụ ezie na ọ nọ na-akụzi ọrụ n'oge gara aga, dịka na seminarị na Mazahirul Ulum na Saharanpur na Uttar Pradesh, ọhụụ a na Nizam u'd-din ụlọ alakụba mere ka ọ baa n'ọkwá ọhụrụ n'ọrụ ya. Madrasa bụ anụ ahụ na ego n'ụdị ọdịda dị oke mma na ndị ogbenye na Meo na ndị na-abụghị Meo (Haq 1972) dị ole na ole. Ọrụ ịgba ọsọ nke madrasa na obere ego nwere ihe siri ike, Ilyas na-ejikwa ego ya mee ihe mgbe ụfọdụ iji mee ka madrasa na-aga n'ihu mgbe ọ na-enwe nchekwube (Haq 1972). Ọ nọgidere na-agbasi mbọ ike na nkuzi na ikwusa ozi ọma Islam ma guzobe ọtụtụ ụra madrasas (Marwah 1979).
"Otú ọ dị, n'oge na-adịghị anya, ọ malitere inwe obi mgbawa na ịgakwuru Islamization" (Ahmad 1991: 512) na ịmara banyere ngwa ngwa gbasaa ụkpụrụ bụ isi nke Islam na Mewat na ọnụnọ nke mmekọrịta syncretic dị na Meo, Ilyas malitere nyocha maka ụzọ ka mma isi gbanwee Meos bụ onye hapụrụ ụkpụrụ Islam bụ isi. Na 1926, n'oge nke abụọ h ajj (njem uka Makka, nke ndị Alakụba niile ga-eme otu oge n'oge ndụ ha, ma ọ bụrụ na ha nwere ike), nghọta Ilyas na-eduzi ya ka ọ bụrụ ụzọ Chineke ka ukwuu, na ịlaghachi India nke a gosipụtara dị ka Tabligh Jamaa.
Tabligh Jama'at putara na Mewat na nzaghachi nye mbili nke otu ndi Hindu 'Arya Samaj. Site na ịrọ òtù a sitere na mmegharị mgbasa ozi abụọ nke Shuddhi (Ọcha) na Sangathan (Nkwado). Ha tinyere aka na nnukwu mbọ iji "merie" ndị Hindu bụ ndị nabatara Islam n'oge ọchịchị ndị Alakụba na India. Ndị ‘Arya Samajis ndị zọọrọ na ha bụ ndị mgbachitere ọhụrụ nke okpukpe Hindu, bụ nke ha boro ebubo na ọ ghọọla okwukwe echefuru echefu ma daba n’aka mbibi nke ndị Brahman, lekwasịrị anya na‘ ịlaghachi ’ndị Alakụba pere mpe. Ndị Alakụba dịpụrụ adịpụ bụ ndị ahụ, ọ bụ ezie na ha anabatala Islam na mbụ ma nakweere ọtụtụ emume na omume Alakụba, ahapụghị kpamkpam omume ndị Hindu dị mkpa wee bụrụ ndị a hụrụ dị ka ndị Alakụba n'aha naanị.
Iji kwado 'mgbasa ozi Arya Samaj n'etiti Meos, ndị Tabligh Jamaa malitere ije ozi nke okwukwe nke Islam ma kpọtee n'etiti Meos nke Mewat na ndị Alakụba nke ndị India kachasị. Tabligh Jamaa ghọtara na ndị Alakụba elegharala ezi ozizi nke Alakụba anya, karịsịa ndị bi n'India. Ọ na-eche na ndị Muslim bourgeoisie dị nnọọ ala n'apata nke ndụ dị oké ọnụ ahịa ma na-ahapụkarị ọrụ ha n'aka Allah n'ime oke. Ozokwa, o kwuru na 'ulama (ndị ọkà mmụta nke Islam) etinyewo uche na ihe owuwu ihe ọmụma n'ime ụlọ akwụkwọ na ụlọ alakụba ma leghaara ikwusa ozi ọma nye ọtụtụ ndị Alakụba. Ihe omuma nke ulama mere ka etiti ndi amamuta na ndi ala ala ndi ala Ala Ala, ndi mere ka otutu ndi ala Ala Ala "jua abughi ezi iwu nke ndi Koran" (Marwah 1979: 88). Omume a na-eyi egwu Islam ọzọ n'India.
Iji mee ka esemokwu a dị n'etiti ndị mmụta na ndị Alakụba, Ilyas kwupụtara ụkpụrụ bụ isi nke Islam na mpaghara ndị a. O kwusiri ike na ibu ọrụ nke ịgbasa Islam abụghị nanị 'ulama kama ọ bụ na ọ bụla Muslim. O kwughachiri ihe otutu ndi ozo kwuru na, mgbe onye amuma Muhammad, onye bu onye ikpe-azu nke ndi amuma, onye amuma agagh adi n'uwa iji gbasaa okwu nke Allah. Ya mere, nkwụsị nke 'ọrụ amụma' bụ ọrụ nke ọ bụla Muslim; onye ọ bụla kwesịrị ịgba ume na-eto Allah ma na-akpọ ndị Alakụba ime ihe ọma ma zere ime ihe ọjọọ. N'echiche a, ebumnuche nke Tabligh Jamaa dabeere na ime ka ndị Alakụba dị ọcha site na syncretism okpukpe ọ bụghị n'ịtụgharị ndị na-abụghị ndị Alakụba. Ka o sina dị, ntọghata gbanwere na mberede, ọ bụghị n'usoro ihe omume, ma na-aga n'ihu na-eme site n'oge ruo n'oge na ọnọdụ dị iche iche.
Echiche Tablighi hibere na mmekọrịta dị n'etiti ndị kwesịrị ntụkwasị obi na Allah (Chineke). Isi okwu ya bụ na ọ nweghị ihe dị mkpa ma baa uru dị ka ịtọlite, wee nwee mmekọrịta a. Dabere na echiche Tablighi, Alakụba nwere nke mbụ nkwenye ụfọdụ, dịka ikwere na otu Chukwu pụrụ iche, ịdị adị nke ndị mmụọ ozi, ikwere na mkpughe nke Chineke na ndị amụma, Lastbọchị Ikpeazụ na ndụ ọzọ. Odi ezigbo mkpa bu ngosipụta nke nkwenkwe ndia n’udi ofufe dika ekpere (ekpere), olu oma na obubu onu, ndi nile metutara nmekorita nke ndi kwesiri ntukwasi obi na Allah. Nke abuo, Islam mejuputara usoro omume nke metutara nmekorita nke mmadu na ibe ya ma gosiputa ya na ulo oru na iwu, dika ezi na ulo, alum di na nwunye na mmekorita na mmebi iwu. Agbanyeghị, ntọala okwukwe a, mmụọ nke na-enye ya ndụ na ndụ, bụ mmekọrịta ndị kwesiri ntụkwasị obi na Allah. Ofufe, nke egosiputara n'usoro n'ememe na omume bu uzo nke nmekorita a. Mmekọrịta a bụ ọrụ maka isi mmalite, mkpa na nnabata ikpeazụ nke ụkpụrụ omume ọma na ntinye aha ha na ọdịbendị ọdịbendị na ọdịiche dị iche. Ọ bụrụ na n'ime dị na nkwukọrịta kpọmkwem na Allah ma na-adọta nduzi na mmụọ nsọ site na Ya, mgbe ahụ nke a na-atụle mmụọ n'ime mmụọ nke okpukperechi dịpụrụ adịpụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na nke a belata, na-adị ike, ma ọ bụ na-apụ n'anya kpam kpam, ọdịdị mpụta ma ọ bụ ọdịdị okwukwe ahụ na-aghọ ihe na-enweghị isi na mmekọrịta dị n'etiti ndị kwesịrị ntụkwasị obi na Allah na-anọgide naanị n'aha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ mmekọrịta dị n'ime ntụkwasị obi na Allah nke na-enye ihe ọ pụtara na uru ọ bara na nkwupụtapụta nke nkwenye ya na ịrụ ọrụ nke okpukpe ya. Ndụ niile, dị ka echiche Tablighi si dị, na mmekọrịta a. N'ihi nke a, ndị kwesịrị ntụkwasị obi ji ịnụ ọkụ n'obi nabata echiche ahụ na enwere ike ịkpalite "omume enyi na enyi" na ndụ nwere ike ịdabere na iwu Allah. Omume nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ebe Allah kwesịrị ịbụ nke sitere n'ịhụnanya, ekele, ndidi, ịchụ onwe onye n'àjà na nraranye zuru oke. Ndị kwesịrị ntụkwasị obi kwesịrị inwe mmetụta ịdị nso mgbe niile nke Allah. Nke a bụ ime nkwenye. Mmekọrịta nke Allah na-eme ka ahụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-enweta kwa ụbọchị jupụta n'ọ joyụ. Ndị ikwesị ntụkwasị obi na-achọzi “amara” nke Allah site na mmezu nke usoro ọrụ na emume dị iche iche. N'ihe banyere Tablagh Jama'at, na "mmekorita di n'etiti tablighi na Allah, a gbanwere alter na ego dika nmekorita obula n'ime uwa" (Talib 1998: 312).
Mkparịta ụka dị n'etiti Tablighi na Allah na-agbakwunyere na usoro ụfọdụ nke mmekọrịta ọha na eze, nke n'onwe ya bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Tablighi na-eme nke a site na nbata ya n'ime njem ahụ ma tinye ya n'ememe na ememe ndị ọ na-amatakwu banyere Allah, na-amatakwu banyere omniscience na ike niile, n'ikpeazụkwa site na ntinye ofufe dị ọcha na-eche na Chineke dị nso. Enwere ike ịkọwa iwu maka tabligh (ọhụụ) ka ọ bụrụ òkù ịbanye na Tabligh Jamaa ma soro n'omume na ememe ya iji gosipụta okwukwe na nkwenye nke Allah, onye na-adịgide mgbe niile na ndị kwesịrị ntụkwasị obi. E nyere ndi kwesiri ntukwasi obi iwu ka ha rube isi n'iwu nke Allah ka ha wee nwee ezi uche nke juputara na Allah ma n'ekele ya n'ezie.
Tabligh ndị mmadụ na-eguzosi ike na ụkpụrụ isii nke abụọ mbụ bụ akụkụ nke ogidi ise nke Islam. Ha bụ: shahadah; nhazi; 'ilm na dhikr; ikram i-Muslim; ikhlas i-niyat; na ọnya i-waqt.
Akpa bụ shahadah, ma ọ bụ isiokwu nke okwukwe, nke bụ nkwupụta na ọ dịghị chi ma Allah ma na onye amụma Muhammad bụ onye ozi ya. Akwụkwọ nke Okwukwe nwere akụkụ abụọ: otu bụ ịnakwere ịdị adị nke Allah na ịdị ukwuu ya na ịdị n'otu, nke ọzọ bụ ịgba akaebe banyere amuma amuma nke Muhammad na nrubeisi nye Ya.
Nke abụọ bụ ụgwọ ọrụ ise (ekpere). Ndị a bụ ihe kachasị mkpa maka ndụ dị irè, a na-ahụkwa ha ka ha mepee ụzọ n 'elu nke ime mmụọ na nsọpụrụ Chineke na omume.
Ihe nke atọ bụ 'ilm na dhikr (ihe ọmụma na ncheta Chineke). Obere oge n'echi ụtụtụ mgbe a na-eme ememe ncheta na obere oge na mgbede mgbe a ga-eji ihe eji eme ihe maka nzube ndị a. N'okwu ndị a na-eme na ụlọ alakụba, na-ege ntị na ikwusa ozi ọma site na 'amir (onye ndu), ọgbakọ na-ekpe ekpere nafl (supererogatory), na-agụ kor'an ma na-agụ hadiths. Ha na-enwekwa nri ụtụtụ na nri abalị ha, n'otu oge a, otu onye nwere ike ịhụ mmetụta nke òtù ụmụnna nke Islam, ịdị n'otu na ịdị umeala n'obi gosipụtara n'ihu ọha n'etiti ọgbakọ. Ihe a nile na-agba ndị na-abịachi anya oge ka ha nọgide na-arụ ọrụ (Sikand 2002).
Iwu nke anọ bụ ikram i-Muslim (na-asọpụrụ Muslim ọ bụla). A ghaghị igosi nkwanye ùgwù na nlegharị anya n'ebe ndị Alakụba ibe gị nọ. N'ọnọdụ ndị Alakụba na-eto eto, ndị Alakụba oge ochie ga-emeso ha n'ụzọ obiọma na ịhụnanya, nakwa maka ndị Alakụba oge ochie, ndị Alakụba na-eto eto kwesịrị igosi ha nsọpụrụ na mmasị.
Iwu nke ise bụ ikhlas i-niyat (emendation of intention and sincerity). A Muslim ga-eme ọ bụla otu mmadụ edinam n'ihi Allah. Ejikọtara nke a na nzube nke ndụ dị ka ọgbụgba na-adịgide adịgide nye Allah.
Nke isii bụ tafriq i-waqt (iji wepụta oge). Akwụsị oge ejikọrọ na echiche nke khuruj (njem njem). Ikere òkè na khuruj bụ ihe dị mkpa maka mgbalị ikwusa ozi ọma ma ọ bụ ikwusa ozi ọma ebe ndị mmadụ (ndị otu) nke mmadụ iri (mgbe ụfọdụ karịa ma ọ bụ karịa na-adabere n'ụdị mmadụ mbụ) njem si n'ụlọ ruo n'ụlọ ikwusa ozi ọma site n'otu ebe gaa n'ihu na ịkpọ ndị Alakụba ka ha kwupụta ezi omume na omume Islam. Akwụkwọ okpukpe Tabligh na-ekwu na onye ọhụrụ ga-ewepụta oge maka atọ chillah (40 ụbọchị na-eme otu chillah) iji mụta banyere Islam, maka ọrụ tabligh, na iji dozie onwe ya maka onwe ya nakwa maka uru ọ bụla. Ozugbo mmadụ rụzuru nke a, mgbe ahụ, ọ dịkarịa ala ka ọ ga-ewepụta oge iji chekwaa oge ọ bụla ma gaa na ụbọchị atọ nke ọnwa n'ọnwa ọ bụla iji kwado ihe ọmụma na omume ahụ. Otú ọ dị, usoro omume nke Tablighis gafere oge ndị a, ọtụtụ ndị na-anọkwa oge dị ogologo, ebe ndị ọzọ na-etinye ndụ ha niile n'ọrụ arụ ọrụ.
Ihe dị ka nkeji iri abụọ site na New Delhi bụ ebe dịpụrụ adịpụ Nizam u'd din, bụ ebe isi ụlọ ọrụ dị na Tabligh Jamaa dị. Isi ụlọ ọrụ bụ otu obere ụlọ alakụba a maara dị ka Masjid Bangala, mana taa, mgbe ọ na-esitegharịrị ntọala na mgbatị, ọ ghọọla nnukwu ụlọ asaa nke nwere ike ime ihe dị ka puku iri na abụọ na Tablighis n'otu oge. E nweela mgbanwe dị iche iche na gburugburu Masjid Bangala ochie, na-ahapụ ọtụtụ n'ime ihe ochie ochie ahụ.
N'ime nnukwu ụlọ ụlọ asaa ahụ, òtù nke Madrasa Kashf-ul 'Ulum, ọtụtụ ụlọ maka ndị ọbịa dị mkpa na ndị nleta, ọnụ ụlọ nkwurịta okwu ole na ole na obere ụlọ maka ndị ọkà mmụta ebe obibi na ndị nkwusa ukwu. Echekwara ya na ụlọ ahụ dị n'akụkụ ala ochie nke Masala bụ Masjid bụ ili abụọ e wusiri ike nke Mawlana Ilyas na Mawlana Zakariya.
Isi ụlọ ọrụ na-ejikwa otu onye amir, ọ bụ ezie na kemgbe 1995 ka ndị isi abụọ, Mawlanas Sad na Zubair na-eduga ya. N'otu oge, a nabatara ndị na-enyere ndị ọrụ afọ ofufo iri abụọ aka na ndị ọrụ afọ ofufo iri ise, onye nke ọ bụla nwere ọrụ dị iche iche (Durrany 1993: 24). Ka ọ dị, ugbu a, ihe ọmụma dịnụ na-atụ aro ọnụ ọgụgụ dị elu dịka mmadụ abụọ na-arụ ọrụ. Isi ụlọ ọrụ Nizam nọ n'isi ụlọ ọrụ bụ ebe niile na-arụ ọrụ na ndị mmadụ na-abịa ma na-aga oge niile. Ha na-abịa ịmụta ọrụ ndị na-adịghị mma n'aka ndị isi na Tablighis na ndị ọkà mmụta, na-ekwurịta banyere ọrụ Tablighi na mpaghara ha ma ọ bụ mba ha na-enweta ntụziaka n'aka ndị ndú.
Ewezuga ofufe, dịka ekpere ekpere, ekpere ekpere, ịgụgharị nke kor'an, icheta Allah na ịgụ ihe ndị a, isi ụlọ ọrụ Nizam u'd-din na-enye ebe obibi ma ọ dịkarịa ala puku Tablighis abụọ n'oge ọ bụla, yana dị ka nri atọ kwa ụbọchị. Ọ na-ahazikwa ihe nlekọta visa maka Tablighis dị n'ógbè na ndị ọzọ na-ahazi mkpa njem, karịsịa maka ndị mba ọzọ.
N'ụlọ isi ụlọ, onye ọ bụla nọ na-eme mkpebi niile site na onye nlekọta (consultative committee) n'oge mushawara (mkparịta ụka ma ọ bụ nkwekọrịta) nke na-eme kwa ụbọchị. Dị ka ọmụmaatụ, obere ihe dị ka onye na-achọghị Tablighi na-achọ ịkwụsị khuruj maka ọkara ụbọchị iji gaa ihe gbasara onwe ya chọrọ nkwado nke shura. A na-enwe nkwurịta okwu kwa ụbọchị ka ọtụtụ okwu dị iche iche bilitere nke chọrọ mkpebi n'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị nọ na ya. N'ikwu ya n'ozuzu, ndi mmadu ndi mmadu choro ka ha na-ekwu okwu n'olu, ma oburu na 'amir biara iwere oru. A na-achọ ka ndị òtù na-ekpo ọkụ na-agagharị njegharị na n'ihi nke a, ọ bụghị mgbe niile ka ndị òtù niile na-egwu egwu egwu kwa ụbọchị.
N'India, Tabligh Jamaa nwere isi ulo oru mpaghara n'isi obodo ndi ozo nke ihe dika onu ogugu. N'adịghị ka isi ụlọ ọrụ Nizam dị n'isi, ndị a bụ ndokwa dị mfe n 'ụlọ obere ụlọ nke ụlọ alakụba ndị ahụ ndị òtù ha nwere mmekọrịta dị mma na Tablighis ma ọ bụ na-anabata ihe ọrụ na-adịghị mma. Ala India ọ bụla nwere 'onwe ya' nke na-arụ ọrụ n'okpuru ntụziaka kpọmkwem site n'isi ụlọ ọrụ Nizam u'd din. N'ọgbakọ, obodo dị iche iche na obodo, otu ụlọ ọrụ ahụ dị. A na-emegharị ihe nlereanya a na mba ebe Tabligh Jamaa bụ òtù guzosiri ike. Dịka ọmụmaatụ, n'Australia, usoro nhazi nke Tablighi yiri ụlọ ọrụ Nizam u'd din dị na ọkwa obodo na mpaghara, na mpaghara mpaghara na obere obodo.
Tabligh Jamaa na-elekwasị anya na mgbasawanye nke netwọk nke nhazi ya kama ịkwado ya. Iji nọgide na-enwe ọganihu ya, mmeghari nke ihe karịrị afọ 80 agbanwebeghị site na atụmatụ ntọala mbụ nke ndị ọrụ Tablighi bụ ndị na-aga na khuruj. Mgbanwe nke nduzi, nke na-eche echiche banyere ndị na-elekọta obodo na ndị obodo, nyeere Tabligh Jamaa aka ịnọgide na-eme ihe n'enweghị mkpakọrịta ọ bụla na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ na-elekọta mmadụ.
Ọ bụ ezie na ndị òtù Tabligh bụ òtù dị nnọọ ukwuu, ọ dịghị ndị ọrụ akwụ ụgwọ ma ọ bụ ndị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọrụ nhazi ma ọ bụ nhazi bụ ọrụ ndị enyemaka Tablighi rụrụ, ụfọdụ n'ime ha na-enyefe ọrụ ha n'efu na oge zuru oke.
Site n'ịgbanwe mba nke mmegharị ahụ, mkpa maka usoro nhazi na-eme ngwa ngwa. Ya mere, ndekọ mba ụwa dị ugbu a nwere nkọwa na adreesị nke Tabligh Jama'at na ụwa. Na mpaghara dị n'ime obodo ọ bụla, ọ dị mkpa ka e nwekwuo atụmatụ na usoro nhazi nke ndị ọzọ ka esi apụta ma ebe a na-edebe akwụkwọ ndekọ nke ọrụ tabligh n'ozuzu ya, na khuruj rụọ ọrụ kpọmkwem. Nke a abughi nani mmezi nke ndi Alakụba a ma ama maka oru na ikwusa ozi oma, kamakwa ha na enye aka n'inwe ihe oru tabligh na odi irè.
Tabligh na ndị mmadụ, na-elekwasị anya na revivalism nke Islam na-eche banyere mkparita uka na nwughari nke ndị ọzọ Muslim na-egosi na ọha mmadụ (Ali 2012). Na oge a nke oge a, ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ mara na ha aghọwo ndị na-adị ndụ na ndị na-abaghị uru. Ihe omuma nke di na ebe ndi mmadu no bu ihe oriri a na - emeghari nke a na - agbanwe ma na - agbanwe mgbe niile gbasara otu anyi si ele ya anya ma obu kwado ya na usoro omenala. Ya mere, maka Tabligh Jamaa, a ọhụrụ mkpokọta njirimara bụ ihe dị mkpa nke. Iji nweta njirimara ọhụrụ, ndị Tablighis nakweere atụmatụ nke ijikọ ndị Alakụba na ọha mmadụ site na nwughari nke "oke". A na-ebelata oke ochie dabere na ịrọ òtù, ụlọ akwụkwọ nke echiche, asụsụ, agbụrụ, klaasị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ọnọdụ mmekọrịta akụ na ụba, maka ọdịmma nke usoro mmekọrịta ọhụụ metụtara akụkụ ọ bụla nke ndụ kwa ụbọchị. Boundkèala ọhụrụ ndị a gbadoro ụkwụ n’ọdịnala Alakụba, ma ọ bụ Qur’an na Hadis. Ndị Alakụba na-elekwasị anya, dị ka Tablighis si dị ugbu a, Ebe a, ọ bụghị ụwa ọzọ na Ndụ. Nye ọtụtụ Tablighis mgbe ahụ, ịhapụ mkpakọrịta ndị dị ugbu a na usoro ndụ nke ndụ oge gaa n'ihe ime mmụọ, ma ọ bụ ọchịchọ maka Allah, na-ekere òkè na usoro nke ịmepụta aha ọhụrụ.
Mgbanwe nke Tabligh Jama'at wetara na ndu ndi Alakụba bu ngbanwe nke njirimara. 'Mgbanwe a na-achọ imebi usoro kachasị nke ịdị adị nke ihe na omume nke oge a nke na-eguzo n'ụzọ nke nsọpụrụ Chineke, mbuli elu ime mmụọ, na okike nke obodo Muslim' (Ali 2003: 179). Whichwa nke a na-achụso ndụ na-aghọ ihe mgbaàmà na-agbanwe mgbe niile nke njirimara. "Amata tablighi mgbe o dabere na iwu nke Allah na nnabata nke akhirat dika mmalite nke ndu ebighi ebi, gbanwee ihe ndi amatara iji nye site na uwa a" (Talib 1998: 339).
N'ihe banyere mkparita uka na imeghari njirimara Muslim, Tablighis wepuru uche ha site na ụkpụrụ ndi mmadu na omenala ndi omenala nke ndi isi obodo Muslim na obuna ndi mmadu. Maka ndị Tablighis na-elekwasị anya na "onwe" dị ka etiti ụwa, dị ka ebe etiti maka ịmepụta ihe; onye ahu bukwa ihe diri izoputa nke ya. Ya mere, ekpere a na-ekpe mgbe a na-eme emume, na-eyi uwe ọdịnala ndị Alakụba, ụmụ nwoke na-agba ajị agba, na-amụba anya iji mata ọdịiche dị n'etiti ihe iwu kwadoro (iwu nwere ike ime n'okpuru iwu Alakụba) site na haram (ọrụ amachibidoro ma ọ bụ ihe), ịkọwa ma ole na ole, bụ akụkụ dị mkpa nke ihe oyiyi Tablighi ma ọ bụ njirimara.
Ọ bụ maka nke a mere ha jiri were "mwepu" mana ọ bụghị ajọ echiche megide ndị na-abụghị ndị Alakụba, ma n'otu oge ahụ na-akpachapụ anya na-atụgharị na ihe ha na-eche na ha bụ "ndị a na-akpọ" ndị Alakụba iji merie ihe mgbochi nke ezigbo ma ọ bụ na-eche nke mwepu nke ahụ dị. N'iji usoro nghazi, na-emegide mmegide ma na-adọta nkatọ megide Tabligh Jama'at. Ndị mmegide kachasị oke iwe nke Tabligh Jama'at bụ ndị Barelwis bụ ndị na-eso ụzọ India amụrụ Ahmad Raza Khan Barelwi (1856-1921). Ahmad Raza Khan Barelwi guzobere ọdịnala Barelwi ma ọ bụ usoro mmeghari mgbanwe na obodo North Indian nke Bareilly n'oge 1880s. N'adabaghị na nkuzi Tablighi, ọdịnala Barelwi na-elekwasị anya na nleta nke shrine, emume nke ofufe nsọ, ma na-emesi asọpụrụ nke amuma Muhammad site na mmemme nke ụbọchị ọmụmụ ya na ịme milad ma ọ bụ mawlid (na-abụ abụ otuto nye onye amụma Muhammad na nzukọ na mgbalị ịrịọ mkpụrụ obi ya ka ọ gaa leta ha) (Sanyal 2005).
Ali, Jan. 2012. Nzukọ nke Islam na-emeri Ụwa nke Oge A: A Na-amụ banyere Tabligh Jamaa. New Delhi: Ndị na-ede akwụkwọ.
Ali, Jan. 2003. "Islam Revivalism: Isi nke Tablighi Jamaat." Ihe omuma nke nta nke Muslim 23: 173-81.
Ahmad, Mumtaz. 1991. "Okpukpe Islam na South Asia: Jamaat-na Islami na Tablighi Jamaat nke South Asia." Pp. 457-530 na Fundamentalisms Echetara: The FundamentalismProject, nke Martin Marty na Richard Appleby dere. Chicago: University nke Chicago Pịa.
Azzam, Abd al-Rahman. 1964. Ozi ebighi ebi nke Muhammad. New York: New American Library.
Durrany, KS 1993. Mmetụta nke Okpukpe Alakụba. Bangalore: Christian Institute for Study of Religion and Society.
Haq, Muhammad. 1972. Òtù Okwukwe nke Mawlana Muhammad Ilyas. London: George Allen na Unwin.
Hasni, Mohammad. nd Savaneh Hazrat Maulana Mohammad Yusuf, Amir Tablighi Jamaat Pak-o-Hind. Lahore: Nasharan-e-Qur'an.
Marwah, BỤ 1979. "Tabligh Movement n'etiti Meos nke Mewat." Pp. 79-100 na Mmegharị Ulo oru n'India, Nkebi nke II, nke M Rao dezie. New Delhi: Azu.
Metcalf, Barbara. 2005. Ndozi nke Islam na Britain India: Deoband, 1860-1900. New Delhi: Oxford University Press.
Sanyal, Usha. 2005. Ahmad Riza Khan Barelwi: Na ụzọ nke amuma. Oxford: Oneworld.
Sikand, Yoginder. 2002. Origins na Development nke Tablighi Jamaat (1920-2000): Ọmụmụ Ihe Na-atụkọ Ọnụ n'Otu Obodo. New Delhi: Orient Longman.
Talib, Mohammed. 1998. "Ndị na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ mara na ha bụ ndị Alakụba." Pp. 307-40 na Islam, Obodo na Mba: Akara Muslim na South Asia na N'ọfe, nke Mushirul Hasan dere. New Delhi: Azu.